MUUQAAL: Daawo Wasiiro iska Casilay Khaatumo oo eedayn dusha uga Tuuray Madaxwayne Cali Khaliif | Maxaa dhacay – Marqaanmedia24.com
March 12, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 2
Safiya cali Caateeye iyo Maryan Xasan Diiriye (Goonle) oo Shir jaraa’id ku Qabtay magaalada Buuhoodle ayaa sheegay inay iska Casileen Xilkii Wasiirnimo ee ay ka hayeen maamulka Khaatumo.
Tolkeena Siciid Harti xalkoodu waxuu ku duugan yahay in ay dhaahdaan wadciga dhabta ah ee ay beel ahaan iyo deegaan ahaan ba ku sugan yihiin. Nabadda waxaa gundhig u ah barwaaqada. Barwaaqada na waxaa gaadiid u ah horumarka. Horumarka na waxaa fure u ah ismaamulka iyo dawladnimada dhabta ah.
Dadku baahiyo iyo duruufo ay ka siman yihiin ayuu dhul ay wadaagaan ku walaaleeyaa oo daruuri ay tahay in heerkaas la isku la dhaqmo. Siciid Hartigu sina uga ma maarmi karo tolweynaha uu dagalka Puntland la wadaago. Waa dagal dhaxal u wada ah ee ay u siman yihiin ee khassab ku wada tahay in ay qaabkii ay ugu heshiin lahaayeen oo uguna wada noolaan lahaayeen hindisadeeda la yimaaddaan. Horumarka iyo barwaaqadu waxaa asbaab lagu kasbado u ah kaabayaal dhaqaale iyo hab u oolka deegaameed ee dhulka ay wadaagaan.
Barri iyo baxar ayay u baahan yihiin oo uu Eebbaheen in ka badan ku galladay. Kheyraad badan oo dabiici ah ayuu Rabbi dagalkooda ugu baahay. Ismaamulka iyo dawladnimadu nidaam sugan ayay ku dhisan yihiin oo ay ugu muhiimsan yihiin canshuuro, isu socodka dadka iyo ganacsiyada, bulsho isu furan oo dhexdeeda suuq isu ah, amni iyo kala dambeyn.
In ay Sool iyo Cayn maamul goboleed yeelato oo ay Sanaag maamul kale yeelato oo ay Bari, Nugaal iyo Mudug na maamul gooni ah lahaadaan mise na uu dagalku mid yahay oo kana dhexeeyo waa waalli cass ee ma aha wax caqli gal ah iyo dow toona. Maamullo beeleed oo dhowr ah ee garbaha isku haya oo haddana nidaamyo dawli ah ee kala duwan u kala hoggaansan mise na isku kaabayaal dhaqaale iyo bulshadoo is wada ah u talinaya wax lagu tilmaamo anigu ma aqaan runtii. Xalku waxaa weeye oo keli ah in maamulkaas guud ee heer dagal loo wada yagleeshay ee Puntland waxii qaldamay inta laga saxo dib loo habeysto oo la isku wada dhaqo.